Abathengisi beMT4 abagqwesileyo-Apho ungazifumana khona ezona ziNtengiso ziBalaseleyo zeMT4-Novemba 2021
Abathengisi beMT4 baPhambili 2021-Apho ungayifumana khona eyonaNtengiso ye MT4
Ukuba ujonge ukuthenga, ukuthengisa kunye nokuthengisa iiasethi kwinduduzo yekhaya lakho-kuya kufuneka usebenzise iqonga lokurhweba. Phambili koku yiMetaTrader 4- okanye ngokulula 'MT4'. Ngamafutshane, i-MT4 liqonga lezorhwebo elenziwa ngamakhulu kubarhwebi abakwi-Intanethi.
Itekhnoloji esekwe yinto ekuvumela ukuba urhwebe kwi-Intanethi, ubuncinci kuba inamandla okwenza ii-odolo kwii-microseconds. Enye yezona zinto zibalaseleyo nge-MT4 Ngaba ikuvumela ukuba uthengise zombini i-forex kwaye Ii-CFD-emva koko zikunika ukufikelela kumawaka ezixhobo zemali.
Kananjalo, ukuba ujonge ukufumana ezona ziqonga zibalaseleyo zixhasa inkqubo yeMetaTrader 4- qiniseka ukuba usifunda isikhokelo sethu Abathengisi beMT4 abahamba phambili be2021.
Qaphela: Nangona eyona nto iphambili kuwe inokuba kukufumana umrhwebi oxhasa iMT4, kuya kufuneka ujonge izinto ngaphandle kweqonga ngokwalo. Oku kuya kubandakanya imirhumo yokurhweba, imigaqo, inkxaso kubathengi, kunye neentlawulo.
Yintoni iMetaTrader 4 (MT4)?
Kwindlela yayo esisiseko, iMetaTrader 4 yinkqubo yokurhweba ngekhompyuter esetyenziswa ngabarhwebi bazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Iqonga lokurhweba likuvumela ukuba urhwebe ngonqakrazo lweqhosha, kuba linamandla okutshatisa iiodolo zakho nabanye abarhwebi kwii-microseconds.
I-MT4 ihlala ikhethwa ngabarhwebi kuba iyabavumela ukuba baququzelele iinkonzo zorhwebo ngaphandle kokufuna ukwakha iqonga labo lobunini. Endaweni yoko, ii-brokers zifuna nje ukuba zilayisenise kumvelisi we-MT4-MetaQuotes Software. I-MT4 lukhetho olukhethekileyo kubarhwebi kuba inamandla okuxhasa zombini i-forex kunye neeCFD.
Kananjalo, ayisiyiyo kuphela i-MT4 brokers ekuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise ngaphezulu kwe-100 yeepara zemali, kodwa uya kuba nakho ukufikelela kumawaka ezinye izixhobo zemali. Oku kubandakanya yonke into esuka kwisitokhwe kunye nezabelo, izinto zorhwebo, ii-indices, ii-ETFs kunye nee-cryptocurrensets.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-MT4 ilungele abathengisi be-newbie. Ayisiyiyo kuphela ukuba ubume bendawo yonke icocekile kwaye bucolile, kodwa ikunika ukhetho lokuziqhelanisa nokukhetha izinto ozithandayo. Kananjalo, oku kukuvumela ukuba usete eyakho urhwebo usuku isikrini njengoko ubona kufanelekile.
Iinkonzo kunye neengozi zokusebenzisa i-MT4 Broker?
Ivumela abathengi ukuba bathumele iinkonzo zorhwebo ngaphandle kokwakha iqonga lokuthengisa
Ukuququzelela urhwebo nge24 / 7
Yenza ukuthengisa kokubini i-forex kunye neeCFD
Iyahambelana neWindows, iLinux, kunye neMac, kunye ne-Android kunye ne-iOS
Iyafumaneka kwi-750 + kubarhwebi abakwi-Intanethi
Ayifanelekanga kurhwebo oluphezulu (HFT)
Inguqulelo esekwe kwisikhangeli ayixhasi urhwebo oluzenzekelayo
Iimpawu kunye nezibonelelo zeMT4
Ukuba uvile i-buzz ejikeleze i-MT4, kodwa awuqinisekanga ukuba zeziphi izinto kunye nezibonelelo ezenza ukuba ithandwe kakhulu ngabarhwebi, qiniseka ukujonga oku kulandelayo:
Iplatifomu yee-Asethi ezininzi
Okokuqala nokuphambili, abathengisi be-MT4 bayakuvumela ukuba uthengise i-forex kunye nee-CFD ngeqonga elinye. Kananjalo, akukho mfuneko yokurhweba kubarhwebi abahlukeneyo. Endaweni yoko, uya kuba nakho ukufikelela kumawaka Urhwebo lweCFD izixhobo, kunye neemfumba ze Forex yorhwebo ngababini-ngomthengisi omnye weMT4.
Ukuba ujonge amaxabiso ezinto ezihlaziyiweyo, iMT4 ilungile. Iqonga likuvumela ukuba ufumane iikowuti ezikwi-Intanethi ngexesha lokwenyani, ekuvumela ukuba usabele kwiintshukumo zamaxabiso njengoko zisenzeka.
Ukuba uluhlobo lomrhwebi othanda ukwenza uhlalutyo lobuchwephesha obuphambili, emva koko i-MT4 uyigubungele. Iqonga lokurhweba ligubungela ngaphezulu kwe-30 + izalathi zobugcisa.
Kananjalo, uya kuba uxhobile ngezixhobo ezifunekayo zokuhlalutya iindlela zembali yamaxabiso kwaye ngenxa yoko-cinga ukuba ezi ndlela zinokuba nefuthe njani kwicala elizayo le-asethi ekuthethwa ngayo.
Ukuba unomdla wokusebenzisa ii-MT4 brokers ezininzi- mhlawumbi ngeenjongo zokunciphisa umngcipheko, iqonga likuvumela ukuba ufikelele kuzo zonke iiakhawunti zakho zokurhweba ezixhaswa nguMT4 ngokusebenzisa ihabhu enye. Oku kufanelekile ukuba ufuna ukungenisa useto lwakho lwentengiso olungaphaya kumthengisi wakho we-MT4.
Indawo yeMarike ekwi-Intanethi
IMT4 ikwasingatha indawo yentengiso eqhutywa ngabathengi. Oku kuvumela abathengisi ukuba bathengise nantoni na evela kurhwebo oluzenzekelayo ukuya kwizalathi ezitsha kunye neziphuculweyo zobuchwephesha.
Izaziso kunye nezilumkiso
Isibonelelo esongezelelekileyo sokusebenzisa i-MT4 broker kukuba iqonga likuvumela ukuba usete izilumkiso zamaxabiso okwenyani. Umzekelo, masithi ufuna ukurhweba nge-EUR / USD. Unomdla wokungena kwimarike xa i-EUR / iUSD idlulela kwindawo yayo yokumelana ne-1.14.
Xa isenza njalo, ufuna ukwaziswa kwangoko ukuze uthengise ngesandla isibini. Kananjalo, kufuneka usete inqaku lakho lokuqalisa kwaye umthengisi we-MT4 uya kukwazisa xa ibethile.
Ukuba usengumrhwebi we-newbie kwaye woyikisiwe malunga nokukhetha ezakho ezentengiso, kutheni ungasebenzisi uphawu lweMT4 lokuthengisa? Oku kukuvumela ukuba ukhethe umboneleli, kwaye i-terminal ye-MT4 iya kuqhubeka nokujonga imisebenzi yabo.
Ngaphezulu kokuxhamla kwimpumelelo yabarhwebi abanamava, oku kuya kukuvumela ukuba ufumane ukujonga kwamehlo kweentaka kwizicwangciso ezininzi ezisetyenziswa ngumboneleli wakho.
Iakhawunti yeDemo ye-MT4
Enye yezona zinto zibalaseleyo zokusebenzisa i-MT4 broker kukuba uya kuba nakho ukufikelela kwiakhawunti yedemo epheleleyo. Kwabo abangaziyo, oku kukuvumela ukuba urhwebe ngemali 'yephepha', oko kuthetha ukuba ungazivavanya zethu izicwangciso zorhwebo ngaphambi kokubeka engozini imali yakho.
Kwelinye icala, ukusebenzisa iakhawunti yedemo ye-MT4 kuluncedo kuba ikuvumela ukuba ubambisane ne-ins kunye nokuphuma kokusebenzisa i yorhwebo ntengiso iqonga. Oku kubandakanya ukuziqhelanisa nokuthengisa iiodolo ezinje ngeelahleko zokumisa kunye neodolo zenzuzo.
Nangona kunjalo, singaphikisa ukuba ukusebenzisa iakhawunti yedemo ye-MT4 ukulungiselela iimarike zezemali zehlabathi lokwenyani akunangqondo. Isizathu soku kukuba awuzukufumana kwiimpembelelo zokuphulukana nemali. Olu luphawu oluphambili ekufundeni xa urhweba nge-Intanethi- kwaye yinto enokuthi yenziwe kuphela ngabarhwebi abanobuchule.
Zeziphi izixhobo ezixhaswa yiMT4 Brokers?
I-MT4 ixhasa uninzi lweenkqubo ezisebenzayo kwidesktop kunye nakwizixhobo eziphathwayo, kunye neqonga lomthengisi wayo wewebhu.
Usebenzisa njani i-MT4 Broker?
Ukuba usaqala nje kurhwebo lwe-Intanethi, i-MT4 inokubonakala ngathi yoyikeka ekuqaleni. Kananjalo, sicebisa ukuba sifunde ngokwamanqanaba ngamanyathelo isikhokelo esidwelise apha ngezantsi.
Inyathelo 1: Khetha i-MT4 Broker
Okokuqala nokuphambili, kuya kufuneka uvule iakhawunti kunye nomthengisi okwi-Intanethi oxhasa i-MT4. Ngale nto ithethwayo, kuya kufuneka ujonge iimetrikhi ngaphandle kweqonga elingaphantsi.
Oku kufanele kubandakanya igama lomthengisi kunye nokuma kolawulo, iifizi zokurhweba kunye nokusasazeka, inkxaso kubathengi, kunye nokunye. Ukukunceda apha endleleni, sidwelise ezona zikhetho zethu zintlanu ze-MT4 broker zisezantsi kwesi sikhokelo.
Nje ukuba ukhethe i-MT4 broker oyithandayo, kuya kufuneka uvule iakhawunti. Uyacetyiswa kakhulu ngale nto ngokusebenzisa isikhangeli sakho sewebhu ngokulula. Kuya kufuneka ufake iinkcukacha zakho-njengegama lakho elipheleleyo, idilesi, ubuzwe, inombolo yerhafu yesizwe, umhla wokuzalwa kunye neenkcukacha zonxibelelwano.
Umrhwebi naye uya kukubuza imibuzo malunga nokuma kwakho kwezezimali. Oku kuyakubandakanya uhlobo lweshishini osebenza kulo, kunye nomvuzo wakho wonyaka. Ngaphaya koko, umthengisi we-MT4 kuya kufuneka azi malunga namava akho okuthengisa kwangaphambili. Oku kuyakubandakanya iintlobo zeeasethi ozithengileyo ngaphambili kunye nobungakanani obuqhelekileyo bobugcisa bakho.
🥇 Inyathelo 3: Qinisekisa isazisi sakho
Ukuze uhlale uthobela imithetho yasekhaya kunye neyengingqi yokulwa imali, umthengisi wakho weMT4 kuya kufuneka aqinisekise isazisi sakho. Oku kwaziwa njengenkqubo ye-KYC (Yazi uMthengi wakho), kwaye ifuna nje ukuba ulayishe amanye amaxwebhu.
Ukuqinisekisa isazisi sakho kuya kufuneka unikeze ikopi yesazisi esikhutshwe ngurhulumente, esinokuba yincwadi yokundwendwela okanye iphepha-mvume lokuqhuba. Ukuqinisekisa idilesi yakho, unokufaka ikopi yakutshanje yesiteyitimenti sebhanki, into oyisebenzisayo, okanye ingxelo yerhafu.
🥇 Inyathelo 4: Dipozithi Ezinye zeNgxowa-mali
Uya kudinga ukuxhasa ngemali iakhawunti yakho yomrhwebi. Nangona iindlela ezithile zokuhlawula ziya kwahluka kwi-broker-to-broker, iya kubandakanya enye okanye nangaphezulu kwezi zinto zilandelayo:
Nje ukuba ufake idipozithi yakho, ungaqhubeka nokukhuphela i-MT4 kwiqonga olithandayo.
Inyathelo 5: Khuphela uze ufake i-MT4
Ukuze ufumane uninzi kwiqonga le-MT4, uyacetyiswa ukuba uyikhuphele kwisixhobo sedesktop. Nokuba usebenzisa iWindows, iMac, okanye iLinux - iMT4 ikugubungele.
Yiya nje kwicandelo lokukhuphela lomthengisi olikhethileyo kwaye ukhethe isixhobo esisebenzayo. Nje ukuba uyifakile le nkqubo, ungangena ngeenkcukacha zakho zeakhawunti yomthengisi we-MT4.
🥇 Inyathelo 6: Vula indawo
Ngoku ukulungele ukuvula indawo yakho yokuqala. Kuya kufuneka kuqala ukhangele iklasi oyikhethileyo (enje nge-forex) okanye isixhobo sezezimali (esifana ne- GBP / USD). Nje ukuba ukwiskrini sokurhweba ngeasethi onqwenela ukuyithengisa, cofa kwindawo ethi 'IZIXHOBO' phezulu kwesikrini, ulandelwe ngu 'UMYALELO OMTSHA'.
Uya kuthi emva koko usete iiparameter zeodolo yakho. Oku kuya kubandakanya:
Nokuba ufuna ukubeka 'ukuthenga' okanye 'ukuthengisa' iodolo
Umthamo ongathanda ukuthengisa ngawo (umzekelo inani lezivumelwano zeCFD)
Zeziphi ii-odolo zentengiso ongathanda ukuzibeka (ii-odolo zokuyeka ilahleko kunye nee-odolo zenzuzo)
Nokuba ufuna i-odolo yenziwe ngexabiso elilandelayo elikhoyo, okanye ngexabiso elichazwe kwangaphambili
🥇 Inyathelo 7: Vala isikhundla sakho
Ukuba awuyifakanga ilahleko yokumisa, okanye uyenzile, kwaye ujonge ukuphuma kurhwebo ngesandla, kuyakufuneka ucofe iqhosha elithi 'TERMINAL', elandelwa ngu 'TRADE'.
Uya kuthi emva koko ube nembono yeentaka-zamehlo zazo zonke izikhundla ozivulekileyo ngoku. Cofa kwi-odolo onqwenela ukuyivala, emva koko ucofe iqhosha u 'X' ukuphuma kurhwebo ngexabiso lentengiso langoku.
Uluhlu oluphezulu lwe-Forex MT4 Brokers: Iiplatifomu ezi-5 eziPhezulu ze2021
Ukuba ufuna abarhwebi abasebenzisa iMT4, singacebisa ukuba wenze olwakho uphando oluzimeleyo. Kungenxa yokuba kufuneka uqinisekise ukuba umthengisi weMT4 uyahlangabezana neemfuno zakho zorhwebo. Umzekelo, ngelixa abanye abathengisi begqwesa ngokunikezela ngokusasazeka okuqinileyo, abanye babonelela ngemini enye yokurhoxa.
Ngale nto ithethwayo, ukuba awunalo ixesha lokwenza uphando lwakho, qiniseka ukuba ufunda ngokukhetha okuphezulu kwe-5 MT4 broker esikudwelise apha ngezantsi.
1. I-EightCap-Urhwebo ngaphezulu kwama-200 + eKhomishini yee-Asethi
I-EightCap ngumthengisi we-intanethi okwi-intanethi ehambelana ngokupheleleyo neMT4. Unokuthengisa ngaphezulu kwezixhobo zemali ezingama-200 kuleqonga lidumileyo kwaye zimbini iintlobo zeakhawunti onokukhetha kuzo.
Iakhawunti enye ivumela urhwebo lwasimahla lwekhomishini kunye nokusasazeka ukuqala nje ngombhobho omnye. Okanye, unokurhweba kwii-pips eziyi-1 kwikhomishini ethe tyaba ye- $ 0 ngesilayidi ngasinye. Ngokubhekisele kwiimarike, i-EightCap igubungela yonke into ukusuka kwi-forex kunye nezabelo kwii-indices nakwimpahla yorhwebo.
Ayisiyiyo kuphela ukuba ungaqala ngalo broker ngee-100 nje zeedola, kodwa ungathengisa simahla ngeziko leakhawunti yedemo. Okona kubaluleke kakhulu, lo broker ulawulwa ngumzimba we-ASIC.
Urhwebo ngaphezulu kwama-200 + asethi ngaphandle kwekhomishini
Akukho ntengiso ye-imali yedatha
2. I-AVATrade- 2 x $ 200 yeBhonasi yeBhanki eyamkelekileyo
Iqela kwi-AVATrade ngoku libonelela nge-20% yebhonasi ye-forex efikelela kwi- $ 10,000. Oku kuthetha ukuba uyakufuna ukufaka i-50,000 yeedola ukuze ufumane elona xabiso liphezulu lebhonasi. Qaphela, kuyakufuneka ubeke ubuncinci be- $ 1,000 ukufumana ibhonasi, kwaye iakhawunti yakho kufuneka iqinisekiswe ngaphambi kokuba imali ifakwe. Ngokurhoxisa ibhonasi ngaphandle, uyakufumana i-1 yedola kuyo yonke i-0.1 lot oyithengisayo.
Ubuncinci bediphozithi $ 1,000
3. I-EuropeFX - Intlawulo enkulu kunye neQonga lokuShishina ngeFX
Njengoko igama libonisa, i-EuropeFX yingcali ye-forex broker. Ngale nto ithethwayo, iqonga likwaxhasa iiCFD ngohlobo lwezabelo, ii-indices, ii-cryptocurrensets, kunye nezinto zorhwebo. Uyakwazi ukuthengisa nge-MT4, ukuze ukhethe kwisoftware yedesktop, okanye usetyenziso lweselfowuni / lweethebhulethi. Ukuba ufuna ukurhweba ngebrawuza yakho esemgangathweni, umrhwebi ukwabonelela ngeqonga lakhe lendalo- i-EuroTrader 2.0. Ngokwentlawulo, iYurophuFX ibonelela ngokusasazeka okuxineneyo kwizibini eziphambili. Imali yakho ikhuselekile ngalo lonke ixesha, ubuncinci kuba umrhwebi ugunyazisiwe kwaye unelayisensi yiCySEC.
I-MT4 kunye namaqonga orhwebo emveli
Ukusasazeka okuphantsi kakhulu
Udumo olukhulu kwaye unelayisensi yiCySEC
I-akhawunti yePremiyamu ine-idiphozithi encinci ye-1,000 EUR
I-82.61% yabatyali zimali abathengisayo baphulukana nemali xa bethengisa iiCFD kunye nalo mboneleli